သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ အမိုက်စား Photo Editor Application ၃မျိုး – AsiaApps
သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ အမိုက်စား Photo Editor Application ၃မျိုး
December 19, 2017 December 21, 2017 MoonFeaturesNo Comment on သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ အမိုက်စား Photo Editor Application ၃မျိုး
မိတ်ဆွေက Selfie ရိုက်ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်လား ? ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရတာဝါသနာပါတဲ့ သူတစ်ယောက်လား ?
ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူဆိုရင်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် Photo editor application ၃ ခုထဲကတစ်ခုခု ကို မိတ်ဆွေ Phone ထဲမှာ download လုပ်ထားသင့်တယ်နော်။
မိတ်ဆွေရိုက်ထားတဲ့ photo တွေ video တွေမှာ စာထည့်ရေးလုပ်လို့ရတဲ့ application ဖြစ်တယ်။ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး font အရေအတွက်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ပါဝင်တယ်။ အခြား font များကိုလည်း မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက် ထပ်မံdownload ဆွဲနိုင်တဲ့အပြင် အလန်းစား Theme Styles တွေကိုလည်း ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ လက်ရှိ version က 1.7.16 ဖြစ်ပြီး Android များတွင် version 4.03 နှင့်အထက်ရှိမှအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ IOS နှင့် Android နှစ်မျိုးစလုံး အတွက် free download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Image Source – Phonto – Text on Photos
မိတ်ဆွေရဲ့ Photo တွေကို အမိုက်စားဖြစ်အောင် Edit လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ application လေးဖြစ်တယ်။ Edit လုပ်လို့လုပ်ထားမှန်းမသိအောင် natural အတိုင်းဖြစ်စေပြီး တကယ့် Professional Camera နဲ့ ရိုက်ထားသလို မိတ်ဆွေရဲ့ photo ကို perfect ဖြစ်စေမှာပါ ။ Curve, White Balance, HDR scape စတဲ့ pro-level editing toolsတွေပါဝင်ပြီး အခြား မိတ်ဆွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ featuresတွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားလို့မိတ်ဆွေစိတ်တိုင်းကျ edit လုပ်နိုင်မှာပါ ။ Android အတွက် version 4.4 နှင့်အထက်ရှိမှ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ IOS မှာတော့အနည်းဆုံး IOS 9.0 ဖြစ်နေမှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ IOS နှင့် Android နှစ်မျိုးစလုံး အတွက် free download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Image Source – Snapseed
Photo တွေကို mix လုပ်ပေးတဲ့ collage maker application ဖြစ်တယ်။ Classic နဲ့ Stylish နှစ်မျိုးရှိပြီး Classicတွင် design ပေါင်း ၁၀၀ကျော်ပါဝင်ကာ Stylish တွင် design ၄၈ ခုပါဝင်ပါတယ်။ collage တစ်ခုတွင် စုစုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ၉ပုံထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Sticker အမျိုးပေါင်း ၁၂၀ကျော်ကိုလည်း မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ခံ background ၅၀ ကျော် နှင့် Text ကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုသူသန်း၃၀ရဲ့ ထောက်ခံချက်ကို ရရှိထားတဲ့ application ဖြစ်တာမို့ အထူးတလည် ပြောနေစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ application ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ IOS တစ်မျိုးတည်းအတွက်သာ free download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Image Source – Pic Jointer Photo Collage Live
Taylor Swift ရဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taylor Swift : The Swift Life!